PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - ‘Bazali yekani ukukhethela abantwana izakhono!’
‘Bazali yekani ukukhethela abantwana izakhono!’
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-06 - IINDABA - PHINDA KULA
KAPA: AMAPHUPHO omntu ngamnye ebomini afezekiswa ngeendlela ezohlukeneyo kunabanye abantu, oko kubonakele kumdlali weqonga uThandolwethu Jikwa, 23, waseMdantsane kwiphondo leMpuma Koloni.
UThandolwethu ngumfundi eCape Peninsula University of Technology.
Uthi yayiliphupho lakhe ukuba ngumdlali weqonga esakhula nto nje abazali bakhe abazange bavumelane naye ukuba aqhubele phambili nezifundo kwiPerforming Art School emva kokuphumelela ibanga leshumi.
Lo mdlali weqonga uxelele I’solezwe lesiXhosa indlela elithe lafezekiswa ngalo iphupho lakhe.
I’solezwe: Ingaba ugxile kuphela kwisakhono sokuba ngumdlali weqonga?
Thando Jikwa: Andigxilanga kwezemifanekiso bhanyabhanya kuphela, ndingumfundi eCPUT nalapho ndenza khona unyaka wesibini kwizifundo zam zeHuman Resources.
I’solezwe: Uqale nini ukuba ngumdlali weqonga?
Thando Jikwa: Ndiqale ngo2017 kwiCPUT Art Society nalapho ndiye ndaqeqeshwa njengomdlali weqonga ze emva koko ndathatha inxaxheba kwiAuditions zomdlalo kamabonakude iNkululeko nobudlala kuChannel 161. INkululeko ngumdlalo oshicilelwe kwilokishi yaseKhayelitsha. Emva kokudlala kwiNkululeko ndaya kwilizwe laseNamibia ukuya kumela eli loMzantsi Afrika kwiCultural Festival nalapho besisenza imidaniso eyohlukeneyo, ze emva koko ndafumana elinye ithuba lokuba ngomnye wabalinganiswa kumboniso iNkanyezi nethe yaqala ukudlala okokuqala ngeCawa umhla wesibini kuChannel 164
I’solezwe: Ulifumane njani ithuba lokuba ngumlinganiswa kwiNkanyezi
Thando Jikwa: Kuba ngoku ndisaziwa njengomdlali weqonga ndifumene isimemo ze ndasabela kuso nto leyo indinike ithuba lokuba nam ndibe ngomnye wabalinganiswa abathatha inxaxheba kulo mdlalo kamabonakude.
I’solezwe: Njengomdlali weqonga, yintoni osele uyizuzile?
Thando Jikwa: Kukubona abantu abandikhuthazayo yaye ukubonwa ngabantu ukuba ungakwazi ukuyenza into nokuba uphuma kwikhaya elinjani.
I’solezwe: Yeyiphi imingeni ojamelene nayo njengomdlali weqonga?
Thando Jikwa: Ukungenela iAuditions asiyo ndlwan’inethayo kuba udibana nabanye abantu benetalente uye uzibuze umbuzo wokuba kufuneka usebenzise amaqhinga khon’ukuze uphumelele, yaye uluntu ngokubanzi luza kukwamkela njani, uza kukwazi ukuwudlala ngoku kuko lo mlinganiswa uthe watyunjelwa yena. Kanti ngamanye amaxesha uye ufumane ingxelo engaxolisiyo ngendlela engekhoyo omlinganise ngayo umlingniswa lowo. Ukongeza iyanqaba imisebenzi yokuba ngumdlali weqonga nangona umntu enaso isakhono sokwenza oko.
I’solezwe: Ungacebisa uthini kubantu abaselula nabafuna ukuba ngabadlali beqonga?
Thando Jikwa: Konke kuxhomekeke emntwini ukuba uthanda kangakanani ukuba ngumdlali weqonga. Ungayenzeli kuba ufuna ukuba ngusaziwayo koko udlale indima ebalulekileyo yokuphilisa uluntu, yaye lo nto ingakujiki ukuba ube ngomnye umntu kwindlela okhuliswe ngayo khon’ukuze ungaphulukani nobuwena kweli candelo yaye uzimisele ukufunda kangangoko.
I’solezwe: Ingaba ukhule ukuthanda ukuba ngumdlali weqonga?
Thando Jikwa: Ndikhule ndibukela imifanekiso bhanyabhanya eyohlukeneyo, bendithi xa ugqiba kuphela ndizijonge esipilini ndilinganisa konke ebendikubekele kumabonakude, oko kundenze ndakwazi ukuqaphela iimpazamo zabadlali beqonga.
I’solezwe: Kubadlali beqonga kweli loMzantsi Afrika ngomphi uqondayo ukuba ukutsho kula ndawo?
Thando Jikwa: Baninzi abantu abanesakhono kweli candelo abakwaziyo ngenene ukuba ngabalinganiswa abohlukeneyo. Abantu abafana noPamela Nomvethe, Tina Jaxa, Sizwe Msotho kwanoHlomla Dandala, andijonganga koosaziwayo abaninzi nabaziwayo koko ndithanda umdlali weqonga okwaziyo ukudlala iindawo zabalinganiswa abohlukeneyo.
I’solezwe: Abazali bakho baziva njani ngale talente yakho?
Thando Jikwa: Bachulumance ngeyona ndlela bekwazingca ngam yaye kuqala babengafuni ukuba ndibe ngumdlali weqonga, kodwa kungokunje bayabona ukuba yeyona nto indivuyisayo ebomini. Abazali bam babefuna ukuba ndenze izifundo zeAccounting nangona ndandingayithandi mna.